यस्तो पनि हुन्छ ? भुवनको नाममा फेसबुक खोलेर डेटिङ प्रस्ताव ! - Everest Dainik - News from Nepal
यस्तो पनि हुन्छ ? भुवनको नाममा फेसबुक खोलेर डेटिङ प्रस्ताव !
काठमाडौं, मंसिर २ । एक व्यक्तिले भुवन केसीको नाममा अकाउन्ट खोलेर युवतीहरुलाई डेटिङको प्रस्ताव गरेका थिए ।
केही युवताीले नायक भुवन केसीकै अकाउन्ट ठानेर च्याटसमेत गरे । तर, अकाउन्ट भुवन केसीको नभएको खुलेपछि युवतीहरुले प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए । तर, नक्कली अकाउन्ट खोल्ने व्यक्ति भने पक्राउ परेन् ।
अभिनेता केसीले पनि प्रहरीमा उजुरी गर्न चाँसो दिएनन् । अर्का अभिनेता आयुषमान जोशीको नाममा अकाउन्ट बनाएर युवतीहरुसँग अश्लील कुराकानी गरेको उजुरीसमेत अपराध महाशाखामा पुगेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
ट्याग्स: Bhuwn kc, FB Id